Afovoany Atsinanana: Nosokafana any Iran ny fantson-tsarimihetsika vaovao amin’ny teny Arabo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Septambra 2018 6:35 GMT
(Marihina fa tamin'ny 20 Septambra 2010 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Hanomboka handefa fandaharana ny fantsona vaovao, antsoina hoe iFilm, ahitana sarimihetsika sy andian-tantara indrindra indrindra ny Alakamisy tolakandro ora ao Tehran, hoy ny filoha lefitry ny Repoblika Islamika misahana ny Haino Aman-jery ao Iran (IRIB) , Mohammad Sarafraz, tamin'ny mpitati-baovao ny Alatsinainy.
Natao hanazarana ireo mpiteny Arabo miisa 300 tapitrisa ao amin'ny tontolo Arabo amin'ny tantara sy ny zavakanto ao Iran ny fanombohan'ny tambajotram-pahitalavitra 24 ora tamin'ny 9 Septambra .
Araka an'i Ya Libnan, handefa ireo lahatsary fanadihadiana momba ny fanatontosana sarimihetsika sy ny fanadihadiana horonantsary ihany koa ity fantsona vaovao ity .
Handefa “horonantsary fanadihadiana momba ny fanatontosana sarimihetsika, fanadihadiana horonantsary, sarimihetsika lava ary horonantsary fohy izany,” hoy ny Press TV amin'ny teny Anglisy ao Iran, ary nilaza ihany koa izy ireo fa amin'ny alalan'ny zanabolana Arabsat sy Nilesat ny fantsona no handefa ny fandaharana .
Nanoratra tao amin'ny bilaogy Uskowi momba ny iFilm ihany koa i Amir Taheri sy ny fitaovana ampiasaina izay nangonina tao Iran.
Ny fitaovana sy ny rafitra ampiasain'ny iFilm amin'ny fanatsarana ny horonantsarimihetsika sy ny fandraketana ny tahirin-tsarimihetsika ary ny fitaovana handefasana ny fandaharana dia novolavolain'ny injenieran'ny IRIB World Service ary mahaleotena tanteraka .
Ny fantsona iFilm iraisam-pirenena dia handefa fandaharana ao amin'ny Badr 4 (Arabsat), maridrefy: 12169 MHz, marika famantarana: 27500, FEC 3/4. Azo alaina ao amin'ny Atlantic Bird 4A (Nilesat) ihany koa izy, maridrefy: 11393 MHz, marika famantarana: 27500, FEC 3/4; ary Eutelsat W6, maridrefy: 11564 MHz, marika famantarana: 3214, FEC 3/4.
Ary nanoratra sioka ho an'ny namany Egyptiana momba ilay fantsona vaovao sy ny maridrefy ahazoana azy i Hossam Eid ao Egypta :
Ry zalahy, antsoina hoe iFilm ny fantsona Iraniana vaovao izay mandefa horonantsary amin'ny teny Arabo, ary 11393 ny maridrefiny ao amin'ny Nile Sat.
Nanohy avy eo i Ya Libnan fa heverina ho iray amin'ny paikadin'ny fitondrana Iraniana mba handravana ny fahirano atao amin'ny Iran ny fantsona toy izany:
Telo taona taorian'ny nanombohan'ny Press TV no nivoahan'ny fantsona, izay nolazain'ny repoblika islamika fa tolotra handravana ny “fangejan'”ny Tandrefana ny fampitam-baovao manerana izao tontolo izao.
Tsy ity no fantsona Iraniana voalohany mikendry ny sisa amin'izao tontolo izao.
Manana drafitra amin'ny fanokafana ny fantsona amin'ny teny Espaniôla mandeha 24 ora ho an'ny olona miteny Espaniôla manerantany ihany koa ny Repoblika Islamika .
Natao ny fanokafana ny iFilm rehefa nitombo be ny lazan'ny fantsom-baovao amin'ny teny Anglisy mandeha 24 ora ao Iran dia ny Press TV.
Farany, araka ny voalaza ao amin'ny Ya Libnan , hafahafa ny ezaka ataon'i Iran amin'ny fandravana ny fahirano ao amin'izy ireo sy ny fanokafana ny fantsona mandeha amin'ny zanabolana amin'ny fiteny samihafa raha mbola tsy ara-dalàna ny fangalana fandaharana amin'ny zanabolana ao Iran.
Na dia mampiasa zanabolana aza i Tehran handefasana ny fandaharany any ivelany dia mbola tsy ara-dalàna ny fananana tandro-pifandraisana mandray fandaharana avy amin'ny zanabolana ao amin'ny firenena, izay matetika melohin'ireo manampahefana ho manely ny “fijotson'ny kolontsaina” vahiny.
Tao anatin'ny taona vitsy lasa, nametraka fandraisana zanabolana mangingina tao an-tokantranon'izy ireo ny Iraniana maro, kanefa mety ho lasibatry ny famoretana tsy ara-dalana avy amin'ny mpitandro filaminana izany izay mandraoka ny antenina satelita tsy ara-dalàna.